ကမ္ဘာကျော် ‘အော်သံ ’ ပန်းချီကား ဖန်တီးရှင်ရဲ့ မွေးနေ့ - Hintharmedia
ကမ္ဘာကျော် ‘အော်သံ ’ ပန်းချီကား ဖန်တီးရှင်ရဲ့ မွေးနေ့
December (၁၂) ရက်နေ့ဟာ ပန်းချီဆရာကြီး Edvard Munch ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ Edvard Munch ဆိုသူကတော့ ကမ္ဘာကျော် အော်သံ ပန်းချီကားကြီးကို ရေးဖွဲ့သူပါပဲ။
နော်ဝေနိုင်ငံသား ပန်းချီဆရာကြီး Edvard Munch ကို December လ ၁၂ရက်၊ ၁၈၆၃ မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ Munch ရဲ့ ပန်းချီကားတွေအကြောင်းပြောရရင် သူ့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပါ အဓိကထားပြီး သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Munch ရေးဆွဲတဲ့ပန်းချီကားတွေဟာ သူ့ဘဝပုံစံကို ထင်ဟပ်နေလို့ပါပဲ။
Edvard Munch ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကို ခံစားခဲ့ရသူပါ။
သူ့အသက် ၅နှစ်မှာ အမေဖြစ်သူက တီဘီရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားတယ် … အမေဆုံးပြီး မကြာခင်မှာပဲ အဖေကလည်း စိတ်ကျရောဂါဝင်သွားပါတယ်။ သူ့ အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်မှာ သူ့ရဲ့ အစ်မက တီဘီရောဂါနဲ့ပဲ သေဆုံးသွားပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ သူကပန်းချီပညာကို အရမ်းကို ဝါသနာပါနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူပထမဆုံးရေးခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားတွေမှာတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ မိခင်နဲ့အမ သုံးစွဲရတဲ့ ဆေးပုလင်းတွေ ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပန်းချီဆွဲရာမှာသုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ပြန်လည်ရေးဆွဲထားပြီးတော့၊ ရှုခင်းပုံတွေရေးထားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
သူရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတော့ ပန်းချီက စိတ်အဝင်စားဆုံး အကြောင်းအရာပါပဲ။ နော်ဝေး ရှုခင်းပန်းချီကျောင်းတစ်ခုရဲ့ သူအားကျရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ပန်းချီအဖွဲ့အစည်းမှာလည်း တခြားပန်းချီဆရာတွေနဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ ပန်းချီကားတွေ ကူးဆွဲလေ့ကျင့်ပြီး ဆီဆေး ပန်းချီကားတွေ ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ချစ်ခင်ရသူရဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေအပြင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ Munchရဲ့ နောက်ပိုင်းရေးဆွဲတဲ့ ပန်းချီကားတွေဟာ သူ့ရဲ့ရင်နာစရာ အဖြစ်ဆိုးတွေကို ထင်ဟပ်နေသယောင် မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
၁၈၇၇မှာ စက်မှုလက်မှုကောလိပ်ကို တက်ရောက်ခဲ့ရာ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်တွေကို သင်ယူခဲ့ပြီး physics, Chemistry , mathematics မှာထူးချွန်ပါတယ်။ အနီးအဝေးအမြင် (perspective) တွေနဲ့ ပန်းချီဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ၁၈၈၀ မှာ ပန်းချီဆရာ လုပ်ဖို့ ကျောင်းကထွက်လိုက်ပါတော့တယ်။ ၁၈၈၁ မှာ တော်ဝင်ပန်းချီနဲ့ဒီဇိုင်းကျောင်းကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပန်းပုထုခြင်းနဲ့ သဘာဝကို အနီးစပ်ဆုံး တူအောင်ရေးဆွဲတဲ့ ပန်းချီပညာ (Naturalistic Painting) ကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၈၃ မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးပန်းချီပြပွဲကို သူငယ်ချင်း ပန်းချီကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ နှစ်ကာလတွေအများကြီးထဲမှာ Naturalistic နဲ့ Impression အပါအဝင် ပန်းချီကားပုံစံအမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေ အတော်များများ လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Munch တစ်ယောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Impression ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ သူ့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ အခြေအနေအကြောင်းအရာတစ်ရပ် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ သိပ္ပံနည်းကျဆန်ဆန် လေ့လာမှုှတွေ လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ လူတွေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်က အမူအရာတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ အလွန်အမင်း ဒေါသထွက်ရခြင်းတွေ ၊ အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကို လေးလေးနက်နက် ခံစားတတ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့ ယူဆခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားချက်တွေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကို သေသေချာချာပြန်လည်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာ သူ့ကိုယ်သူ အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းတဲ့ ရှေ့နောက်၊ နီးဝေးအမြင်တွေကလည်း သူ့ရဲ့အသစ်သော အနုပညာရပ်တွေကို ဖန်တီးဖို့ အားဖြည့်ကူညီပေးပါတယ်။
သူ့ရဲ့ပန်းချီကားဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော် The Sick Child ကို ၁၈၈၆ မှာ ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီပန်းချီကားရဲ့အကြောင်းအရာက သူ့အမရဲ့သေခြင်းတရားကို အခြေခံပြီးရေးထားတာပါ။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသော စိတ်ကိုထင်ဟပ်တဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါ။ ပထမဆုံးအကြိမ် impressionism ကို ချိုးဖျက်ခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပန်းချီကားက ဝေဖန်ရေးသမားတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ မိသားစုဆီက ဆန့်ကျင်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Munch က ၁၈၈၀ ခုနှစ်တွေနဲ့ ၁၈၉၀ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ ရေးချက်နည်းစနစ်တွေနဲ့ အရောင်အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးကို ဆက်လက်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကာလတွေဟာ သူ့ရဲ့ရေးဟန်ကို ဖော်ပြဖို့ အတော်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးစားနေရချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စကားလုံးဖြစ်တဲ့ expressionistic ဟာ Naturalistic နဲ့ impressionistic ကြားမှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။
Munch ရဲ့တစ်ယောက်တည်းသော သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Christian Krohg က Munch အကြောင်းကို ပြောပြရာမှာတော့
“သူက တခြားပန်းချီဆရာတွေနဲ့ မတူညီနဲ့မတူတဲ့ ပုံစံနဲ့ ခဏစောင့်ကြည့်တယ်၊ ပြီးတော့ ပုံရေးတယ်။ သူက တကယ့်အဓိက အရာတွေကိုပဲ မြင်တာ၊ အဲ့ဒါတွေကိုပဲ သဘာဝကျကျ ပုံပြန်ရေးတာပဲ။ Munch ပန်းချီကားတွေကို ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေက သူတို့တစ်ခုခုကို မြင်တွေ့ရသွားတဲ့အခါ သူ့ပန်းချီကားတွေထဲက ပုန်းကွယ်နေတဲ့ တစ်ခုခုကို ပရိတ်သတ်ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေတွေ့ရှိစေခဲ့ပါတယ်။
Munch က သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူပန်းချီကားတွေ များစွာ ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခဲ့ရတဲ့ ဘဝအကြောင်းတွေ၊ သူ့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေကို series လိုက် ပန်းချီကားတွေ အများကြီးရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။
1994, January 23 ၊ အသက် ၈၀ပြည့်ပြီး တစ်လလောက်ကြာမှာပဲ နော်ဝေနိုင်ငံမှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ ချန်ရစ်ထားခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားတွေကို Munch ပြတိုက်မှာ ပြသထားဖို့ သေတမ်းစာရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Munch Museum မှာတော့ ခန့်မှန်းခြေပန်းချီကား 1100 ကျော်၊ Drawing 4500ကျော်၊ ပုံနှိပ်ပြီး ပန်းချီကား ၁၈၀၀၀ကျော် နဲ့ ကမ္ဘ္ဘာပေါ်မှာMunch ပန်းချီကားတွေ ပြသရာမှာ အကျယ်ပြန့်ဆုံးသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
1893 မှာ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ The Scream (အော်သံ) ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားဟာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးအဖြစ် လူသိများတဲ့ ပန်းချီကားပါ။ သူ့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး နာကြင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ Munch က ဒီတစ်ခါမှာလည်း သူ့ညီမကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဒီပန်းချီကားကို ရေးဆွဲထားတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီပန်းချီကားရေးဆွဲနေတဲ့ အချိန် ၁၈၉၃ ခုနှစ်မှာပဲ သူ့ညီမက စိတ်ဖောက်ပြန်လို့ ဆေးရုံတက်နေရတာပါ။ တခြားလူတွေရဲ့အမြင်မှာ အရမ်းလှပနေတဲ့ ဆည်းဆာချိန်ကို Munch တစ်ယောက်ခံစားပြီး ရေးဖွဲ့မိတာကတော့ အထီးကျန်ဆန်ပြီး ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ သွေးရောင်လွှမ်းနေတဲ့ တိမ်တွေ…. တောင်ကမ်းပါးနှစ်ခုကြားမှာ စီးဆင်းနေတဲ့ နက်ပြာရောင်ပင်လယ်ကြီး… တံတားပေါ် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ လူနှစ်ယောက်ရှိနေပြီး အရှေ့ကလူပုံစံကတော့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ ထိတ်လန့်နေတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်၊ အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုက အလန့်တကြားအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ “The Scream!!!”
ဘဝရဲ့ရင်နာစရာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ Munch ရဲ့ ပန်းချီကားဟာလည်း သိပ်ကို နာကျင်ခံစားရစေပါတယ်။
ဒီပန်းချီကားဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ပန်းချီကားတစ်ချပ်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားတာက The Scream ပန်းချီကားဟာ ပုံစံလေးမျိုးနဲ့တည်ရှိနေပါတယ်။ ၁၈၉၃ နဲ့ ၁၈၉၅ ခုနှစ်တွေမှာ Pastel နဲ့ ၂ကား၊ ၁၈၉၃ နဲ့ ၁၉၁၀ မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ပန်းချီကား ၂ကားတို့ပါ။ ၁၈၉၅ ပက်စတယ်ပန်းချီကားကိုတော့ ၂၀၁၂ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့ လေလံပွဲမှာ ၁၁၉မီလီယံကျော်နဲ့ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၉၃ အော်သံပန်းချီကားကတော့ Oslo မြို့ရဲ့ အမျိုးသားပန်းချီပြခန်းမှာ ၁၉၉၄ခုနှစ်မှာ ခိုးယူခံခဲ့ရပြီး၊ ၁၉၁၀ အော်သံပန်းချီကားကိုတော့ Oslo မြို့ရဲ့ Munch ပြတိုက်မှာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ခိုးယူခံရပါတယ်။ ဒီပန်းချီကား၂ချပ်လုံးကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ပျက်ဆီးမှုအနည်းငယ်နဲ့ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
The Scream ဟာ Munch ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသော အနုပညာရပ်တစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ အနုပညာရပ်တွေအားလုံးမှာ အမှတ်မိနိုင်ဆုံးသော ပန်းချီကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ဆန်ဆန်လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခံရတဲ့ အနုပညာလက်ရာပါ။
ဒီပန်းချီကားဟာ The Frieze of Life (ဘဝ၊ အချစ် နဲ့ သေခြင်းတရားတို့ရဲ့ကဗျာ) လို့ ခေါင်းစဉ်ရှိတဲ့ ပန်းချီကား series ထဲက တစ်ခုပါ။ ဒီseries မှာ ဘဝ၊ အချစ်၊ ကြောက်ရွံမှု၊ သေခြင်းတရားနဲ့ စိတ်ကျရောဂါတွေကို အကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ သူဟာပန်းချီကားတွေ အများကြီးကို အသွင်သဏ္ဍာန်၊ မူကွဲ၊ အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ The Frieze of Life themes ဟာ Munch ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ပန်းချီကားတွေပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူ့အမ Sophie ရဲ့ ပုံတူပန်းချီကား The Sick Child (1886), Ashes (1894) နဲ့ The Bridge ဆိုတဲ့ ပန်းချီကားတွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ယခင်ဆောင်းပါးပြည်တွင်း ရွှေဈေး မငြိမ်သေး
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးTotol ကုမ္ပဏီ သင်္ဘောကြောင့် ဒေသခံတို့ ငါးဖမ်းလုပ်ကွက် ထိခိုက်သည်ဆိုခြင်းအပေါ် နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံ ရှင်းလင်း